Umenzi wempahla ethengisela abathengisi nabathengisi | Ngexesha
Isisombululo sokuthumela ngeposi Siqonda ngenene ukuba isisombululo seposi sihlala sikhetho lwangaphambili kwishishini le-e-commerce njengoko lisonwabela iqondo eliphantsi. Ukwanelisa ibango labarhwebi abahlukeneyo, siyasebenza ...
Iposi Ukuhambisa ngenqanawe Isisombululo
Siyayiqonda ngokwenyani into yokuba isisombululo seposi sihlala sikhetho lwangaphambili kwishishini le-e-commerce njengoko linandipha inqanaba eliphantsi. Ukwanelisa ibango lomrhwebi ohlukeneyo, sisebenza ngeofisi ezininzi zeposi kule minyaka idlulileyo kwaye siqhubeka nokuphelisa inkonzo embi amaxesha ngamaxesha. Ngoku ezinye zezona zilungileyo.
I-China Post yahlulwe yaziipasile zomhlaba kunye neepasile ezibhalisiweyo. Yinkonzo yepasile yamanye amazwe yeepasile ezinobunzima obungaphantsi kwe-2KG. I-China Post kunye ne-Universal Post Union iphuhlise ijelo lokuposa elithunyelwa kwihlabathi liphela elinokufikelela kwiindawo ezahlukeneyo zeposi kumazwe angaphezu kwama-200 nakwimimandla kwihlabathi liphela. Izinto eziluncedo zenkonzo yeposi yase China: ezoqoqosho kwaye ezifikelelekayo, ukufikelela kwihlabathi liphela, ukucoca amasiko, ukhuseleko nozinzo
Iipasile zeposi zaseBelgium zahlulwe zangamaBelgium ukuvakalisaIipasile kunye neepasile zehlabathi zaseBelgium, zeepasile zamanye amazwe ezinobunzima obungaphantsi kwe-2KG. EBelgium ukuhambisa iipasile kungathunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 eYurophu, kwaye iipasile zehlabathi zaseBelgium zingathunyelwa kumazwe angaphezu kwama-200 kwihlabathi liphela, ulwazi lokulandela ngomkhondo lunokubuzwa, izibonelelo zenkonzo yeposi yaseBelgium: imvume emanyeneyo e-United Kingdom, hayi uthutho lwesibini kumazwe aseYurophu, intlawulo ngekhilogram nganye, ilungele iipasile ezikhanyayo kunye nezincinci, eyamkelekileyo kwiibhetri ezakhelweyo / iimveliso zebhetri ezixhasayo, kwaye yinkonzo ekhethiweyo yokuhanjiswa kwexabiso eliphantsi kweYurophu.
Ijelo lepasile encinci yePostnl yinkonzo yaseYurophu yokuhambisa ipasile eyenzelwe ngokukodwa abathengisi be-e-commerce abanqamlezayo, esekwe eNetherlands, betyhutyha amazwe onke aseYurophu, bexhomekeke kwinethiwekhi yeposi yaseDatshi kunye nenkqubo yokucoca amasiko efanelekileyo, ukwenza umgangatho ophezulu wengingqi Iinkonzo zepasile, izibonelelo zenkonzo yeposi yaseDatshi: amaxabiso akhethiweyo, ixesha elifanelekileyo elizinzileyo, lilungele ukukhanya kunye neephakeji ezincinci, kwaye zinokwamkela iimveliso ezineebhetri ezakhelweyo.
Iposi yaseSwitzerland yahlulwe yandahlulahlula ipasile yomphezulu kunye neepasile ezibhalisiweyo. Yinkonzo yeposi ephezulu ye-5 kwi-UPU kwaye yeyona arhente yeposi iphucukileyo eYurophu. Inamasebe phantse kuwo onke amazwe kwaye inamandla okwenza i-imeyile. Izibonelelo zenkonzo: ukukhutshwa okufanelekileyo kwamasiko, ixesha elifanelekileyo, izibonelelo zoqoqosho, ezifanelekileyo ukukhanya kunye neepasile ezincinci ngaphakathi kwe2KG.
Egqithileyo Inkonzo eyongezwe ngexabiso
Okulandelayo: Inkonzo yokugcina